बेरोजगार हुनुहुन्छ ? शुक्रबार खुल्दैछ सूचीकरण, दर्ता गर्ने कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी !
अशोक घिमिरे/काठमाडौँ, ३० फागुन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण गरिँदैछ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिइएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने छन् ।
यसबाहेक कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’लगायत चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । रासस
ब्याजको पूँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन माग
हिमालय एअरलाइन्स र हुवावे क्लाउडबीच रणनीतिक सम्झौता सम्पन्न
बढ्यो सेयर बजार, सर्किटपछि कारोबार बन्द